2022 haingo halloween halloween halloween matoatoa mihantona haingo
Laharana modely: S0335
Fitaovana: Lamba, Lamba
Anaran'ny vokatra:HalloweenHaingo fety
Keywords: pendant Halloween
Loko: Mainty / Orange / White
Endri-javatra: Ny fomba dia mahafatifaty sy malefaka, ary maivana sy mora entina.
Fomba fandoavam-bola: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Haingo fety Halloween
Halloween mandritra ny
Mainty / Voasary / Fotsy
Ny fomba dia mahafatifaty sy malefaka, ary maivana sy mora raisina.
Safidy tonga lafatra ho an'ny haingo antoko lohahevitra Halloween
• Vokatra lehibe manana kalitao tsara: Ity prop halloween mihantona vita amin'ny landihazo PP mahavelona ary mateza sy matanjaka tsara ampiasaina mandritra ny taona maromaro.Hanome fahagagana mahafinaritra ny vahiny rehetra rehefa miditra izy ireo. Ny vokatra lehibe dia hiasa tsara amin'ny zavatra ilainao.
• 3 Stlyes: Saribakoly Pumpkin Spook miaraka amin'ny satroka mpamosavy, Manolotra loko telo ho azy ireo izahay, Karandoha mainty, fotsy ary fotsy, ary karandoha miloko.
• Vonona hihantona sy hijoro: Ny saribakoly voatavo tsirairay dia misy tady mifanitsy.Ny saribakoly voatavo gnome soedoà mihantona dia mora mihantona na aiza na aiza tianao, azonao ampiasaina ho haingon-trano anatiny ary ahantona eo amin'ny rindrina na eo amin'ny varavarana fidiranao, azonao atao koa ny manantona azy eny ivelany amin'ny hazo miaraka amin'ny haingo Halloween hafa.Endri-javatra lanjaina ao ambany ho an'ny fitoniana fanampiny, afaka mitsangana tsara izy ireo.
1. Ny vidin'ny fifaninanana dia azo atolotra satria isika no mpanamboatra;
2.Low MOQ azo tohanana;
3. Ny kalitao avo lenta dia azo fehezina;
4.OEM / ODM dia raisina ho toy ny sampana fampandrosoana matihanina;
5.Fast Delivery azo atolotra;
1. F: Afaka manome santionany maimaim-poana ve ianao?
A: Eny, afaka manome santionany misy maimaim-poana izahay, fa ny entana dia ho eo anilanao.Ho an'ny santionany namboarina, handoa santionany izahay;aorian'ny baikon'ny toerana dia haverinay ny sarany santionany.
2. F: Inona ny MOQ anao?
A: Amin'ny voalohany, tianay ny hanohana ny orinasan'ny mpanjifanay kely.Noho izany ho an'ny entana amin'ny tahiry dia 1 Piece no ekena;ho an'ny baiko namboarina, miankina amin'ny entana izany.
3. F: Inona ny fotoana fanaterana anao?
A: Amin'ny ankapobeny 7-40 andro aorian'ny fandoavam-bola, miankina amin'ny vokatra sy ny habetsahanao.
4. F: Inona ny fe-potoana fandoavam-bola.
A: Fandoavana amin'ny Western Union na Alibaba escrow, T / T 30% petra-bola alohan'ny famokarana sy 70% fifandanjana ho an'ny ampahany betsaka alohan'ny fandefasana.
teo aloha: kilalao mahafatifaty plastika mipoitra flamingo ho an'ny ankizy
Manaraka: Haingo mihantona amin'ny Halloween Party Eco-friendly Horror Skeleton
Trano fihantsiana manidina manidina voafehy feo...
Fanomezana fialantsasatra, Custom Hat Hat, Kilalao fanomezana, entana fialan-tsasatra, satroka ririnina, Vokatra vaovao,